Toogasho naxdin leh oo lagu dilay Labo Wiil oo Walaalo Soomaali ah oo ka dhacay dalka Sweden Daawo Sawirro!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Toogasho naxdin leh oo lagu dilay Labo Wiil oo Walaalo Soomaali ah oo ka dhacay dalka Sweden Daawo Sawirro!!
Toogasho naxdin leh oo lagu dilay Labo Wiil oo Walaalo Soomaali ah oo ka dhacay dalka Sweden Daawo Sawirro!!
Dec 03, 2016WARAR
Waxaa xalay Magaalada Stockholm ee caasimada dalka Sweden, lagu toogtay labo wiil oo Soomaali ah kuwaa oo la sheegay in ay walaalo ahaayeen, kadib markii goob ay soo weerareen kooxo hubeesan oon wali heebtooda la aqoonsan.
Sida aan Wararka ku heleyno Wiilashan la dilay ayaa fadhiyay goob maqaayad ah oo kutaala xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Rinkeby , waxaana wiilashan mar qura soo weeraray rasaasna la dhacay kooxo hubeesan oo watay gaari yar.
Ciidamada booliiska magaalada Stockholm ayaa daqiiqado kadib soo gaaray goobta uu dilku ka dhacay, waxa ayna ciidamada wadaan baaritaano ku aadan kooxihii weerarkaasi ka dambeeyay oo ku baxsaday gaari ay wateen.
Dilka loo geestay wiilashan walaalaha ah ayaa waxaad aad uga naxay Soomaalida kunool magaalada Stockholm, walina lama oga sababta ka dambeysa dilka loo geestay wiilashan iyo waliba cida ka dambeysay dilkooda.
Previous PostMUUQAAL: Maxaynu ka ognahay Qolka ku dul yaalla Minaarad dheer ee saacadda Magaalada Makkah Daawo!! Next PostMuuqaal: C.raxmaan Cirro oo Sharafta Looga qaaday Hargeisa oo ka Waramay ciidan Qoryo ku qabtay iyo wixii dhacay DAAWO!!